Lix iyo tobon burcadbadeed ah oo maanta lagu xiray Laasqoray, ka dib makii uu daadiyey markab laga leeyahay Norway. – Radio Daljir
Lix iyo tobon burcadbadeed ah oo maanta lagu xiray Laasqoray, ka dib makii uu daadiyey markab laga leeyahay Norway.
Laasqoray, April, 21 – Lix iyo toban burcad-badeed ah ayaa saaka lagu xiray magaalada Laasqoray ee gobolka Sanaag. ka dib markii markab laga leeyahay dalka Norway uu ku daadiyey meel u dhaw magaaladaasi saaka hiirtii waaberi.
Wasiirka ku xigeenka dakadaha ee Puntland Abshir Siciid Saalax oo jooga Laasqoray ayaa waraysi uu goor dhawayd siiyey idaacadda Daljir ku sheegay qabashada raggaasi, waxaana uu intaasi ku daray in tirada burcaddu ay ahayd 18 ayna hayaan 16 ka mid labada dhimanna ay baxsadeen intii aan ciidanku gaarin balse lagu maqan yahay.
Ragga la qabtay ayaa qirtay inay yihiin burcadbadeed ayna muddo bil ku dhaw ku jireen gacanta ciidamada Norway, lagana gubay doonyihii ay wateen sida uu wasiirku sheegay.
Md. Abshir ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee raggaasi ay fiican tahay isla maantana loo soo gudbin doona magaalada Bossaso, halkaas oo lagu maxkamadayn doono.
Boqolaal burcad-badeed ah ayaa ku jira gacanta dawladda Puntland kuwaas oo qaar kood lagu xukumay xabsi dheer, kuwana ay sugayaan in la xukumo.